Ogaden News Agency (ONA) – Qarax Muqdisho Kadhacay oo Khasaare Culus Gaystay.
Qarax Muqdisho Kadhacay oo Khasaare Culus Gaystay.
Posted by ONA Admin	/ July 31, 2017
Sida ay kusoo waramayaan wararka naga soo gaadhaya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayaa tibaaxaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhimatay 15 kalena ay ku dhaawacmeen qarax shalay ka dhacay magaalada Muqdishu .
Goobjoogayaal saxaafada lahadlay ayaa u sheegay inay arkeen maydka toddobada qof ee qaraxan ku dhintay. Dhaawaca ayaa la kala geeyey cisbitaallada Muqdishu. Mas’uuliyiinta amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyey in qof ismiidaamiye ah uu waday baabuurka qarxay ee khasaaraha gaystay.
Baabuurkan ayaa la sheegay inuu ku ku socday waddada Maka Al-Mukarama xilli ay halkaasi ka jirtay saxmad oo ay baabuur badan sanka isku hayeen. Ilaa hadda ma cadda meesha uu u socday baabuurkan ee uu bartilmaameedsan lahaa. Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa saldhigga boliska Waaberi iyo hoteelka Maka Al-Mukarama.